‘सच्चा राष्ट्रवादी थरुनी’ गंगा चौधरीले दिइन् ओली, प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई चुनौतीसहितको यस्तो सुझाव, बालुवाटारमा खैलाबैला! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘सच्चा राष्ट्रवादी थरुनी’ गंगा चौधरीले दिइन् ओली, प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई चुनौतीसहितको यस्तो सुझाव, बालुवाटारमा खैलाबैला!
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौतीसहितको सुझाव दिएकी छन् ।भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बिरुद्ध बोल्दै सच्चा राष्ट्रवादी सांसद चौधरी प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई चुनौतीसहितको सुझाव दिएकी हुन् ।
नेपालको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिन संसदमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्गौवाले अब भारतसँग हेपिएर बस्न नसकिने बताएकी छन्। सत्गौवाले नेपाललाई अन्याय गरेको सुगौली सन्धि खारेज गरिनुपर्ने बताएकी छन् ।नेताहरुलाई सुझाव दिदैँ उनले सुगौली सन्धि खारेज गरिदिएर ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा जारी गर्न बताएकी छन् । ‘नेपाललाई अन्यायमा पारेको सुगौली सन्धि अब हामीले मान्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। यसलाई पनि खारेज गरिदिऊँ’, उनले भनिन्, ‘अब सधैँ भारतसँग हेपिएर चेपिएर बसेर हुँदैन। सुगौली सन्धि खारेज गरिदिएर ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गरौँ।’
‘नेपालका केही उच्च पदस्थहरु भारतको बोली बोल्छन्। राष्ट्रियताको सवालमा मातृभूमिको पक्षमा उभिनुपर्नेमा भारतको पक्षमा उभिइरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘किन यस्तो भइरहेको छ। नेपालकै केही सांसदहरुको गतिविधि पनि त्यस्तै देखिन्छ, शंकास्पद भूमिका र बोली सुनिन्छ संसदमै, यो राम्रो भएन।’
‘गाउँमा जन्मेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएर जाँदा बाजा बजाए, नाचे र उत्सव मनाए, पत्रकार किन दुःखी ?’